Nagu saabsan | Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd.
Tayo Sare, Kala Duwanaansho, Qiimo Jaban Iyo Faa'iido Yar
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. oo la aasaasay 1997, waxay ku taalaa gobolka Shijiazhuang-Hebei — wareegga ugu weyn uguna dhaq dhaqaaqa badan ee isuduwidda horumarka isku xirka be Beijing-tianjin-hebei, waa awooda wax soo saar ballaaran ee musqusha caadiga ah & sare. saabuun, saabuun dharka lagu dhaqo, saabuun dareere ah, jikada iyo musqulaha nadiifiyeyaasha xirfadleyda ah, shirkadu waxay leedahay sagaal xariiq oo wax soo saar casri ah, in kabadan 30 shaqaale xirfad iyo farsamo leh, sadex injineer sare ah, wadar ahaan in kabadan 200 oo shaqaale warshad ah. Sannadkii 2012, shirkadeennu waxay ballaarisay oo ay dhammaystirtay aqoon isweydaarsi ku saabsan dhaqidda dareeraha oo si otomaatig ah u socda, aqoon isweydaarsiga jikada ee aseptic, aqoon isweydaarsiga musqusha oo aan boodhka lahayn iyo aqoon isweydaarsiga saabuunta dhoofinta. Badeecada waxaa lagu iibiyay dhamaan gobolada dalka, magaalooyinka, gobolada iyo suuqyada dibada.
Baiyun maalinlaha ah kiimikada co., LTD had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa fikradda wax soo saarka ee "macaamiisha u janjeedha, tayada badbaadada, ka sareysa guusha, saxsanaanta cusub", iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta badeecada moodada ah, alaabta ceyriinka ah ee caafimaadka qabta iyo tikniyoolajiyadda wax soo saarka sare, alaabtu waa ammaan iyo caafimaad, la jaan qaada The Times, kuna dhow baahida suuqa. Sannadkii 2009, shirkadeennu waxay si guul leh u dhaaftay ISO9001: 2000 shahaadada nidaamka maareynta tayada caalamiga ah iyo shahaadada QS ee tayada amniga, waxayna diiwaangelisay oo ay soo saartay astaamo u gaar ah: "Jingjiu express", "ruichi", "ruibai", "baiyunjiaxu", "Reebay", "Deemax" iyo wixii la mid ah. Shirkaddu waxay leedahay wax soo saar sanadle ah oo ah 10000 tan oo saabuun ah, 50000 tan oo ah wax soo saar wax soo saar ah oo dareere ah.
Siyaasadda howlgalka "tayo sare, kala duwanaansho, qiimo jaban iyo faa'iido yar" waxay u saamaxaysaa shirkadeena inay sameysato nidaam qaab-dhismeed badeecadeed oo sarreeya, mid dhexdhexaad ah iyo mid hooseeya si ay u daboosho baahiyaha dalal kala duwan, suuqyo iyo kooxaha macaamiisha ah. Runtii dadka waanu ka faa’iidi doonaa. Iyadoo fikradda maaraynta "qaabeynta sawirka banaanka iyo xoojinta tayada gudaha", shirkadeena waxaa la gudoonsiiyey cinwaano sharaf ah "qeybta lagu kalsoonaan karo qiimaha", "qeybta wax soosaarka tayada leh", "AAA amaah ganacsi" iyo "wax soo saar tayo wanaagsan leh" sanado badan.
"Keen badeecadaha Baiyun kumanaan qoys oo adduunka ku baahsan" waa baacsigayaga joogtada ah ee fikradda iibka, badeecadeenna Shiinaha si aan u ilaalino waxqabadka iibka oo wanaagsan, haddana waxaan si guul leh u dhisnay shabakad iib ah oo caalami ah, shabakadda ayaa dabooshay Koonfurta Ameerika, Yurub, Afrika, Oceania, koonfur bari Aasiya, iyo Bariga Dhexe. Waxaan haynaa koox soosaara saabuun xirfadlayaal ah, shaqaale iibiya xirfadlayaal ah, la taliyayaal xirfad iib ah kadib, diyaarna u ah inay u isticmaalaan alaabtayada tayada leh ee xirfadeed, boqolaal milyan oo qoysas ah oo adduunka ku baahsan. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno macaamiisha caalamiga ah si loo abuuro mustaqbal wanaagsan.